Ilmada Yaxaaska: Mustafe Wajiyo Badanaa!!! - Jigjiga Online
HomeWararka MaantaIlmada Yaxaaska: Mustafe Wajiyo Badanaa!!!
Maalinba waa qof, ballan iyo cahdi midna ma laha, waxase kasii daran, boobka iyo hantida umadda ee uu isagu dhacayay oo uu kusii daray, in hadda uu shaadh kale usii xidho isla markaana miisaaniyadda uu maamulayay uu ku daro in jeebadashada shacabka uu baadho.
Deegaamada kale ee dalka sida Oromada, Canfarta iyo kuwa kale, kama dhacdo in madaxdoodu qayb ka noqoto qorsheyaal lagu dhacayo bulshadooda, laakiin Mustafe waxa uu abaabulay koox iskugu jirta deegaanka iyo Federaalka oo baadhis ku samayn doonta guryaha magaalooyinka illaa miyiga, isla markaana si badheedh ah usoo dhaca wixii lacago ah ee ay arkaan.
Toddobaadkan, waxa shacabka Soomaaliyeed gilgilay dhac loo geystay muwaadin Soomaaliyeed oo geel iibiyey, lacagtiina lagaga qaatay Magaalo Qaran, taas oo Madaxweyne Mustafe uu ugu hambalyeeyey, hadiyadana ugu daray ciidamadii dhaca u geystay muwaadinkaas.
Arrintan oo cadho badan ka abuurtay deegaanka Soomaalida, waxa markii uu arkay Madaxweynuhu uu hadda ciyaarayaa dheel kale oo uu kaga raad-gadanayo wixii uu sameeyey ee uu waliba qaybta ka ahaa, taas oo uu SRTV ku amray muwaadinka la dhacay ku tilmaamaan mid lacag sharci darro ah dalka soo gelinaya.
War-saxaafadeed uu soo saaray Mustafe ayaa waxa uu ku isticmaalay mid ka mid ah wajiyadiisa badan, waxaanu shacabka Soomaaliyeed ugu sheegay in aanay lacagtooda xuduudaha ka tallaabinin, taas oo aan la garanayn waxa uu uga jeedo, maadaama shacabku aanay lacago xuduudaha ka tallaabin, waxa kaliya ee uga iman karaana ay tahay xoolo ay dalalka deriska u iib geeyeen.
“Shacabka deegaanka soomaalida waxa lagu baraarujinayo in ay lacagahooda ku shubtaan bankiyada islamarkaana ayna wax lacag ah kala talaabin xuduudaha, maadaama ay dawladu soo saartay awaamiir iyo go’aano adag oo lagu xakamaynaayo lacagaha sharci daradada ah ee ka soo galaya xuduudaha, islamarkaana la qaban doono lacagaha laga shikiyo in ay yihiin sharci darro.” Ayuu Madaxweyne Mustafe ku yidhi war-saxaafadeedka uu soo saaray oo lagu dhuftay shaambadda xafiiska Warfaafinta.
Qodobkan, waxa uu Mustafe ku xalaashanayaa lacagta iyo hantida shacabka deggan xuduudaha, sida Wajaale oo uu Madaxweynuhu amray in si badheedh ah loo qaato haddii ay xataa isku dayaan iyagoo magaalada dhexdeeda wax lacago ah wata, taas oo ay u dheer tahay, in xataa ganacsatada baanka ku socda la qaban karo.
Shacabka Soomaalida ee u maleegayo qorsheyaasha hantidooda lagu boobayo ee miisaaniyaddoodii uu jeebada ku shubtay, ayuu haddana mar kale indhaha usoo casaysanayaa Mustafe Cagjar, isaga oo sheeganaya inuu u naxayo.